Mabhazi evana vechikoro | Kwayedza
Mabhazi evana vechikoro
21 Sep, 2020 - 15:09	 2020-09-21T15:54:11+00:00 2020-09-21T15:54:11+00:00 0 Views
Pange paine kushishikana kukuru pakati peveruzhinji kuti vana nevarairidzi, zvikuru vari mumadhorobha, vachaenda kuchikoro sei zvichitevera kumiswa kufamba kwakaitwa neHurumende vemakombi nechinangwa chekumisa kupararira kweCovid-19 munaKurume gore rino.
Zupco iri kushanda nebazi redzidzo yepuraimari nesekondari mukuona kuti basa rekutakurwa kwevana nevarairidzi ringafambiswe sei.
Vana vanosvika 4 000 pari zvino vakanyoresa kuti vapinde muchirongwa ichi muguta reHarare bedzi.
Mutauriri webazi redzidzo yepuraimari nesekondari, VaTaungana Ndoro, vanotsinhira nezvechirongwa ichi.
“Kusvika pari zvino, tawana mashoko ari pamusoro pevadzidzi 4 000 vemuHarare avo vanoda chekufambisa saka tichange tichiti mwana mumwe chete anogara pake oga mubhazi nekuda kwehuwandu hwacho,” vanodaro.
Vanoti vachiri kutambira mashoko maringe nehuwandu hwevana nevarairidzi vanoda kupota vachitakurwa kubva kune mamwe matunhu enyika.